1992 – Year – Alpha Premium
Cash on Delivery (1992) (App member only) ##unicode (18+ဇာတ်ကားဖြစ်လို့ မိသားစုနဲ့အတူကြည့်ရူလို့မသင့်ပါဘူးနော်) ဒီဇာတ်ကားကတော့ မင်းသမီး Sandra Kwanပါဝင်သရုပ်ထားတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ဟာသ 18+ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဆန်ဒီဆိုတဲ့ အမှုစစ်မိန်းကလေးဟာ ချစ်သူရည်းစားထားတဲ့နေရာမှာ အတွေ့အကြုံနုနယ်တဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပါ ဆိုင်မွန်ကတော့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဘားက ပျော်တော်ဆက်အပျော်လင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီအလုပ်ကထွက်ပြီး ရှေးဟောင်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘဝကိုအသစ်ပြန်စနေခဲ့ပါတယ် ဘယ်လောက်ပဲ သူ့ဘဝကိုအသစ်ပြန်စချင်ချင် ဆိုင်မွန်ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေက သူ့အနားမှာဝိုင်းနေခဲ့ပါတယ် ဆိုင်မွန်ရဲ့သူငယ်ချင်း တရားရုံးရောက်လို့သက်သေထွက်ဆိုပေးဖို့လိုက်လာရာက ဆန်ဒီနဲ့ဆိုင်မွန်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် တစ်ဖက်မှာလည်း သူဌေးမတစ်ယောက်က ဆိုင်မွန်ကို အပျော်လင်အနေနဲ့ငှားဖို့ချဉ်းကပ်လာခဲ့ပါတယ် ဘဝအသစ်မှာ မိန်းမကောင်းလေး ဆန်ဒီနဲ့တွေ့ဆုံံခဲ့ပေမယ့် ဘဝဟောင်းဖြစ်တဲ့အပျော်လင်အလုပ်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာကြည့်ရူအားပေးကြပါဦးနော် ##zawgyi (18+ဇာတ္ကားျဖစ္လို႔ မိသားစုနဲ႔အတူၾကည့္႐ူလို႔မသင့္ပါဘူးေနာ္) ဒီဇာတ္ကားကေတာ့ မင္းသမီး Sandra Kwanပါဝင္သ႐ုပ္ထားတဲ့ဇာတ္ကားျဖစ္ၿပီး ဟာသ 18+ဇာတ္ကားပဲျဖစ္ပါတယ္ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းကေတာ့ ဆန္ဒီဆိုတဲ့ အမႈစစ္မိန္းကေလးဟာ ခ်စ္သူရည္းစားထားတဲ့ေနရာမွာ အေတြ႕အႀကဳံႏုနယ္တဲ့ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ပါ ဆိုင္မြန္ကေတာ့ အေတြ႕အႀကဳံရွိတဲ့ ဘားက ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္အေပ်ာ္လင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအလုပ္ကထြက္ၿပီး ေရွးေဟာင္းပစၥည္းေရာင္းဝယ္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဘဝကိုအသစ္ျပန္စေနခဲ့ပါတယ္ ဘယ္ေလာက္ပဲ သူ႔ဘဝကိုအသစ္ျပန္စခ်င္ခ်င္ ဆိုင္မြန္ကိုႀကိဳက္တဲ့ေကာင္မေလးေတြက သူ႔အနားမွာဝိုင္းေနခဲ့ပါတယ္ ဆိုင္မြန္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း တရား႐ုံးေရာက္လို႔သက္ေသထြက္ဆိုေပးဖို႔လိုက္လာရာက ဆန္ဒီနဲ႔ဆိုင္မြန္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါတယ္ တစ္ဖက္မွာလည္း သူေဌးမတစ္ေယာက္က ဆိုင္မြန္ကို အေပ်ာ္လင္အေနနဲ႔ငွားဖို႔ခ်ဥ္းကပ္လာခဲ့ပါတယ္ ဘဝအသစ္မွာ မိန္းမေကာင္းေလး ဆန္ဒီနဲ႔ေတြ႕ဆုံံခဲ့ေပမယ့္ ဘဝေဟာင္းျဖစ္တဲ့အေပ်ာ္လင္အလုပ္ကိုလက္ခံလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဘာေတြဆက္ျဖစ္မလဲဆိုတာ ဒီဇာတ္ကားမွာၾကည့္႐ူအားေပးၾကပါဦးေနာ္ Review – Hmue File Size ...
IMDB: 8.0/10 371,308 votes
IMDB: 7.8/10 46,109 votes
A River Runs Through It A River Runs Through It (1992) ================= IMDb Rating – 7.2 နော်မန်မက်ကလင်းဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ငါးမျှားတံကိုင်ပြီး ရပ်နေခဲ့တယ်။ စက္ခုရဲ့တုရှုမှာမြစ်တစ်စင်း။ ရေစီးထဲကိုကြိုးကိုပစ်ထည့်ရင်း ရစ်သမ်တစ်ခုအတိုင်းလက်လှုပ်ရှားနေပေမယ့် သူ့စိတ်တွေက ဒီငါးမျှားတံမှာမရှိတော့ဘူး။ သူရပ်နေတဲ့မြစ်ကမ်းပါးကို ပတ်လည်ဝိုင်းထားတဲ့ တောင်တွေကြားက အလင်းရောင်ဟာ တဖြည်းဖြည်း မှိန်ပြလာတယ်။ ဖြူဖွေးပါးလျနေတဲ့ ဆံပင်တွေဟာ သူဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ သက္ကရာဇ်‌‌တွေရဲ့ သက်သေပါပဲ။ သူချစ်တဲ့လူတွေကို သူနှစ်ခါပြန် ချိုးလို့မရတဲ့ မြစ်တစ်စင်းက ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီ။ ရေတွေရဲ့ အသံကို သူ နားစိုက်ထောင်ကြည့်တယ်။ သူ့အဖေ သင်းအုပ်ဆရာ ရီဗားရန့်မက်ကလင်းကတော့ တစ်ခါပြောဖူးတယ်။ “ဟိုးတုန်းက ရွှံ‌‌တွေပေါ်ကို မိုးစက်‌တွေကျပြီး ကျောက်တုံးတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။ အတိကျအဆို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းငါးရာအကြာတုန်းကပေါ့။ ကျောက်တုံးတွေမဖြစ်လာခင်မှာ ဒီကန်ကြီးရဲ့အောက်ခြေမှာ တကယ်တမ်းရှိခဲ့တာက ဘုရားသခင်ရဲ့စကားလုံးတွေပဲတဲ့” သူတကယ်တမ်းကြားနေရတာကတော့ ဘုရားသခင်ရဲ့ စကားလုံးတွေမဟုတ်ဘဲ သူချစ်ခဲ့တဲ့လူ‌တွေရဲ့ စကားလုံးတွေပါပဲ။ သူ့အဖေပြောနေကြ တရားစာတွေ၊ သူ့ညီလေးပေါလ်ရဲ့စကားလုံးအရိုင်းတွေ၊ သူ့ဘဝရဲ့အချစ်ဂျက်ဆီရဲ့ စကားလုံးချိုချိုတွေ မြစ်အောက်ဘက်ကကျောက်တုံးတွေအောက်မှာ ခိုဝင်နေတဲ့စကားလုံးတွေကို သူကြားနေရတယ်။ ဟိုးအတိတ်နေ့တစ်ရံတစ်ခါဆီတုန်းက ဒီမြို့ကလေးရဲ့နေ့ရက်တွေကို သူပြန်ကြားနေရတယ်။ မြို့လယ်‌ခေါင်က အုတ်ခုံကလေးပေါ်မှာ ထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို့ရဲ့ကလေးဘဝတွေ လူငယ်ဘဝတွေကို သူပြန်ကြားနေရတယ်။ လူဟာ ...
IMDB: 7.2/10 52,689 votes
The Player The Player (1992) အညွှန်း *************************** (ဒီထဲကမင်းသားကThe Shawshank Redemption (1994)ထဲမှာ စကားလေး မပွင့်တပွင့်ပြောရင်းကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကို သိမ်းပိုက်သွားတာ အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါရဲ့) Hollywood ရဲ့ ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလောကမှာ ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်လုပ်ရတာဟာ ထင်သလောက်မရိုးရှင်းလှပါဘူး…. စာရေးဆရာတွေဆီက တစ်ရက်တစ်ရက်ကို ကမ်းလှမ်းလာတဲ့ ရာနဲ့ချီသော ဇာတ်လမ်းပေါင်းစုံကို နားထောင်ပြီး ဇာတ်ကားရိုက်သင့်မရိုက်သင့် ဆုံးဖြတ်ပေးရပါတယ်… ကမ်းလှမ်းလာသမျှဇာတ်လမ်းတိုင်းကို ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်ခံဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါ စာရေးဆရာတွေရဲ့ မုန်းတီးမှုကိုခံကြရပါတယ်… ဂရစ်ဖင်န် မေးလ် ဟာလည်း ဟောလီးဝုဒ်နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးစတူဒီယိုတစ်ခုရဲ့ အကြီးအကဲတွေထဲက တစ်ယောက်ပါ… တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ဆီကို အမည်မသိ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဆီက ခြိမ်းခြောက်စာတွေ အဆက်မပြတ်ရောက်လို့လာခဲ့ပါတယ်… ဒီချိန်းခြောက်စာတွေဟာ တစ်ရက်ထဲမဟုတ် အကြိမ်ရေများလာတဲ့အခါမှာတော့ ဂရစ်ဖင်တစ်ယောက် စိတ္တဇဖြစ်လာတယ်… အဲ့ဒီနောက် ဒီကိစ္စကို တစ်ယောက်ထဲဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားတော့တယ်… အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး မဟာပြဿနာပေါင်းစုံတက်တော့တာပါပဲ…… ဒီဇာတ်ကားဟာ တစ်ခေတ်တစ်ခါရဲ့ နာမည်ကျော်မင်းသားကြီး Tom Robbins ဦးဆောင်ထားပြီး Greta Scacchi နဲ့ အခြား နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင်များစွာပါ၀င်ထားပါတယ်… ဒါ့အပြင် ဆုပေါင်း (၁၄) ဆုအထိဆွတ်ခူးထားပြီး ၀က်၀က်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းအစမှ အဆုံးအထိ ရင်တထိတ်ထိတ်ကြည့်ရမဲ့အပြင် ယနေ့ခေတ်နဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့ ရသတွေခံစားမှာဖြစ်လို့… ကြည့်ရှုခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ…
IMDB: 7.5/10 52,274 votes
IMDB: 7.0/10 5,567 votes
IMDB: 7.3/10 1,672 votes
IMDB: 6.9/10 3,084 votes
IMDB: 6.9/10 2,126 votes
Royal Tramp 1+2 မင္းသားၾကီး စတီဖင္ေခ်ာင္ရဲ႕ IMDb Rating (7.2/10) ရရွိထားတဲ့ ဟာသဇာတ္ကားပါ။ ရယ္ရလြန္းလို႕ အူေတာင္တက္ပါတယ္။ ဘဝရဲ႕ရွင္သန္ေနထိုင္မႈပံုစံမ်ိဳးစံုထဲမွာ ဒီဇာတ္ကားထဲက ဇာတ္ေကာင္ေဝခြ်ဲဘိုရဲ႕ေနထိုင္မႈစရိုက္ပံုစံကိုေတာ့ အေတာ္သေဘာက်မိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္စိတ္ထင္ ဒိန္ခဲေရႊ႕တဲ့စာအုပ္ထဲက ဖိန္႕တစ္လံုးေဆာင္ထားတဲ့ လူတစ္ေယာက္ပံုစံမ်ိဳးပါ။ ဘဝဆိုတာ ၾကမ္းတမ္းတယ္…မရိုးရွင္းဘူး… ကံၾကမၼာကလဲ အံစာတံုးတစ္တံုးလို က်ခ်င္တဲ့နံပါတ္ကိုခ်ျပတယ္…ဒီလိုဘဝၾကီးထဲမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ႏွစ္ေျမာခံစားဖို႕ အရာအားလံုးကို ၾကံဳသလိုေျဖရွင္းသြားျပီး ေလာကရဲ႕အႏွစ္သာရကိုအျပည့္အဝခံစားသြားတဲ့ ေဝခြ်ဲဘိုဆိုတဲ့ဇာတ္ေကာင္ဟာ စိတ္ညစ္စရာေတြေတြ႕လာတဲ့အခါ အမွတ္ရစရာအျဖစ္ရွိေနမွာပါ။ ဇာတ္လမ္းကေတာ့… ေဝခြ်ဲဘိုဟာ တစ္ဝမ္းတစ္ခါးကိုၾကံဳသလိုေျဖရွင္းေနသူပါ။ တစ္ေန႕ေတာ့ ဘုရင့္ကိုေတာ္လွန္ေနတဲ့အဖြဲ႕ထဲ မထင္မွတ္ဘဲေရာက္သြားျပီး နန္းတြင္းမွာ အေယာင္ေဆာင္အမႈထမ္းျပီး ဘုရင္ကိုလုပ္ၾကံဖို႕နဲ႕ သိုင္းက်မ္းကိုခိုးယူဖို႕ေစလႊတ္ခံရပါတယ္ ဒါနဲ႕ ေရႊနန္းေတာ္မွာ အမႈထမ္းဖို႕ အလုပ္သြားေလွ်ာက္တာ မထင္မွတ္ဘဲ ကုန္းကုန္းအမႈထမ္းေခၚတဲ့ဖက္ေရာက္သြားျပီး ေဝွးသင္းတဲ့ေနရာကိုေရာက္သြားပါတယ္။ ကံေကာင္းစြာနဲ႕ ေဝွးသင္းမခံရဘဲ နန္းေတာ္ရဲ႕အရႈပ္ထုပ္တစ္ခုမွာ အမႈထမ္းဖို႕ထပ္မံေစခိုင္းခံရပါတယ္။ ေရႊနန္းေတာ္ကလဲ အေတာ္ရႈပ္ေထြးျပီး ဘုရင္ကလဲ ကေလးအရြယ္မို႕ အမတ္ေတြဟာ သူတစ္လူ ငါတစ္မင္း လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ေနၾကပါတယ္။ သူဟာ နန္းေတာ္အတြင္းမွာ ဘုရင္နဲ႕ပါထပ္မံခင္မင္သြားတဲ့အခါမွာေတာ့……. ေဝခြဲ်ဘိုဟာ …ဘုရင္ကိုလုပ္ၾကံခ်င္သူအဖြဲ႕ထဲကလဲျဖစ္သလို… သိုင္းက်မ္းခိုးယူမယ့္အဖြဲ႕ကလဲျဖစ္သလို… ဘုရင့္ဘက္ေတာ္သားလဲျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ…
IMDB: 7.2/10 3,012 votes
Royal Tramp 1+2